I-BOflat: ifulethi elihle elinentendelezo yangaphandle
Indlu entsha, eqaqambileyo netofotofo, enofikelelo olukhethekileyo. Indawo enkulu kunye nenomtsalane yangaphandle yepropathi, ukuphumla elangeni, ukufunda okanye ukonwabela ikofu.
Ifakwe kwindawo ebalaseleyo yokufikelela kwiziko lembali laseBologna kunye neendlela eziphambili kunye nesikhululo seenqwelomoya. Imizuzu eli-10 ukusuka kwigumbi lokuhlala ungahamba phantsi kwe-portico yaseSan Luca, eyona ndawo inde emhlabeni.
Ilungele izibini, iintsapho, amaqela abahlobo okanye abahambi beshishini.
Indlu ye-45sqm ibekwe kumgangatho ophantsi, inomnyango ozimeleyo kunye nendawo yentendelezo yabucala, ilungele ikhefu lokuphumla. Indawo yokuhlala enkulu, kunye nekhitshi kunye nebhedi ye-sofa (140 x 200 cm), eqaqambileyo kunye neyomhla, ixhotywe ngazo zonke izinto eziyimfuneko (i-TV, i-Wifi, i-air conditioning). Ikhitshi lixhotyiswe ngabo bonke ubutofotofo ukwenza ukuhlala kwakho esixekweni kube mnandi ngakumbi. Indawo yokulala iquka igumbi lokulala elinombhede ophindwe kabini (160x200 cm) kunye nendawo enkulu ye-wardrobe. Igumbi lokuhlambela, libanzi kwaye lixhotyiswe ngomatshini wokuhlamba.
Indawo yokuhlala ezolileyo, eqhagamshelwe kakuhle kwaye isetyenziswa ziindawo zokutyela, iipizzerias kunye neevenkile ezinkulu.
Mna ngokobuqu ndiyayihoya indawo yokungena kwaye ndikhona ukukunceda ngalo naluphi na ulwazi ngexesha lokuhlala kwakho.